China ST Series C Frame တစ်ခုတည်းသော Crank စက်မှုစာနယ်ဇင်းစက်ရုံနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ | Daya
ခန္ဓာကိုယ်တင်းကျပ်မှု (ပုံပျက်သော) 1/6000 ။
OMPI pneumatic dry clutch နှင့်ဘရိတ်ကိုသုံးပါ။
slider သည်ထောင့်နှစ်ထောင့်ခြောက်ထောင့်လမ်းညွှန်လမ်းကြောင်းကိုအသုံးပြုသည်။ slider လမ်းညွှန်သည်ကြိမ်နှုန်းမြင့်မာကျောမှုနှင့်ရထားလမ်းကြိတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအသုံးပြုသည်။
လက်ကိုင်ပုဝါသည်သံမဏိ ၄၅ ခုထက် ၁.၃ ဆပိုမိုအားကောင်းပြီးသက်တမ်းပိုရှည်သည့် ၄၂CrMo သတ္တုစပ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
ကြေးနီလက်ကိုသံဖြူဖော့စဖရပ်ရတ်ကြေးဝါ ZQSn10-1 ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး၎င်းသည်ခွန်အားသည်သာမာန် BC6 ကြေးများထက် ၁.၅ ဆပိုမိုမြင့်မားသည်။
အလွန်အမင်းထိခိုက်လွယ်သောဟိုက်ဒရောလစ် overload protection device ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်တာရှည်ခံခြင်းနှင့်သေဆုံးခြင်းတို့၏သက်တမ်းကိုထိရောက်စွာကာကွယ်နိုင်သည်။
အမြင့်ဆုံးသော SMC ဖိအားကိုထိန်းညှိသောအဆို့ရှင်၊
optional မှိုခေါငျးအုံး (လေထုကူရှင်) ။
ဟိုက်ဒရောလစ် Overload ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိရိယာ
manual slider ညှိခြင်းကိရိယာ (ST60 အောက်)
Electric Slider ညှိစက် (ST80 အထက်)
စက်မှုမှိုအမြင့်ညွှန်ပြချက် (ST60 အောက်)
ဒစ်ဂျစ်တယ်မှိုအမြင့်ညွှန်ပြချက် (ST80 အထက်)
slider နဲ့မှိုချိန်ခွင်လျှာ device ကို
cam controller ကိုလှည့်
Air ကိုအရင်းအမြစ် connector ကို
မှားယွင်းသောပေးပို့ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု device ကိုများအတွက် Reserved interface ကို
ထိတွေ့မျက်နှာပြင် (ကြိုတင်ချိုးခြင်း၊ ကြိုတင်တင်ယူခြင်း)
Pneumatic မှို pad ပါကိရိယာ
လမ်းခွဲ (လေ, စက်နှင့် NC)
DAYA ဖြောင့်ဘက်နှစ်ချက် crank လာကြတယ်စာနယ်ဇင်း
အခြားအဖြောင့်အခြမ်းကို double crank စာနယ်ဇင်း
Daya သတင်းစာ ပလက်ဖောင်းနှင့်လုံခြုံရေးခြံစည်းရိုး၊ clutch ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်အအေးဓာတ်ပြောင်းလဲခြင်းတို့အတွက်အဆင်ပြေသော၊ အဓိကမော်တာခါးပတ်သည်အလွယ်တကူညှိ။ ရနိုင်ပြီးနောက်ဆက်တွဲပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်အဆင်ပြေသည်။ ပိုလုံခြုံပြီးပိုအဆင်ပြေပါတယ်။
အခြားစာနယ်ဇင်းများပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုပလက်ဖောင်းမရှိဘဲ။ clutch ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု၊ ရေနံအစားထိုးခြင်း၊ အဓိကမော်တာခါးပတ်အားညှိခြင်းစသည်တို့သည် forklift ၏အကူအညီဖြင့်သာပြီးစီးနိုင်ပြီး၎င်းသည်နောက်ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်းအတွက်အဆင်မပြေပါ။ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောဘေးအန္တရာယ်အချို့ရှိသည်။
Daya သတင်းစာ Daya သတင်းစာ၏ထောင့်လေးထောင့်၊ ပုံနှိပ်ခြင်းဖွဲ့စည်းမှုတွင်ဆလိုက်လမ်းညွှန်ရထားကိုစားပွဲကိုယ်ထည်ရှိလမ်းညွှန်ရထားများအားလုံးပါ ၀ င်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောလမ်းညွှန်ရထားလမ်းမျိုးသည်မြင့်မားသောပုံနှိပ်ခြင်း၏တိကျမှု၊ ခိုင်ခံ့မှုကိုဆန့်ကျင်သော ၀ င်ဆန့်နိုင်သည့်စွမ်းရည်၊
အခြားစာနယ်ဇင်းများညာဘက်ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်းတစ်ဝက်ပူးတွဲပါရှိသည့်လမ်းညွှန်ရထားလမ်းကိုမွေးစားသည်။ ပုံနှိပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းလမ်းညွှန်ရထားလမ်းအပိုင်းတစ်ခုနှင့်ထိတွေ့နေသည်။ ပုံနှိပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းဆလိုက်လမ်းညွှန်ရထားလမ်းကိုအလွယ်တကူစောင်းနိုင်သည်။ ဘက်လိုက်မှုမရှိသည့်ဘက်လိုက်မှုဝန်စွမ်းရည်၊ ရထားကြီးများ ၀ တ်ဆင်မှု၊ တိကျမှုကြာရှည်သောအချိန်နှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစရိတ်စများနှင့်အတူစောင်းရန်လွယ်ကူသည်။
Daya သတင်းစာ အင်အားသုံးအချက် ၂ ခုအကြားအကွာအဝေးသည် ၆၀% ကျော်သည်။ အားသာချက်များ - အင်အားသုံးလျှောက်လွှာအချက် ၂ ခုအကြားအကွာအဝေးကြီးသည်၊ အင်အားသုံးအသုံးအဆောင်အမှတ်နှစ်ခုအကြားအကွာအဝေးကြီးမားလေလေဒီဇိုင်းကုန်ကျစရိတ်မြင့်လေလေဖြစ်သည်။
အခြားစာနယ်ဇင်းများအမှတ်နှစ်ခုအကြားအကွာအဝေးကိုယေဘုယျအားဖြင့် 50% ထက်နည်းသည်, ဆိုးကျိုးများ - အင်အားသုံးခုနကအချက်နှစ်ခုကြားအကွာအဝေးသေးငယ်လေလေ၊ လမ်းညွှန်ရထားလမ်းကိုစောင်းရန်လွယ်ကူပြီးလမ်းလမ်းသည်ဝတ်ဆင်ရန်လွယ်ကူပြီးလမ်းညွှန်ရထားလမ်း၏တိကျမှုသည်နည်းပါးသည်။
Daya သတင်းစာ အတင်းအကျပ်ပါးလွှာသောရေနံလည်ပတ်မှုစနစ်၊ စွမ်းအင်ချွေတာခြင်း၊ ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည်၊ ပန်ကာအပူစွမ်းဆောင်ရည်သည်ကောင်းမွန်သည်၊ အမဲဆီချောဆီနှင့်ယှဉ်လျှင်တစ်မိနစ်လျှင် ၅-၁၀ ခိတ်ဖြင့်တိုးနိုင်သည်။
အခြားစာနယ်ဇင်းများ လျှပ်စစ်အမဲဆီစုပ်စက်၊ အမဲဆီပြန်လည်အသုံးမပြုနိုင်သော၊
Daya သတင်းစာ လေဖြတ်ခြင်းနှင့်အတူတူဖြစ်သည့်အခါအတင်းအဓမ္မပါးသောရေနံလည်ပတ်မှုစနစ်သည်အဆီချောဆီနှင့်ယှဉ်လျှင်ပိုမိုထိရောက်မှုရှိပြီးတစ်မိနစ်လျှင် ၅-၁၀ ခိတ်တိုးနိုင်သည်။ ဂျပန် JIS အဆင့် ၁ စံကိုအတိအကျလိုက်နာပါ။ ဂျပန် JIS အဆင့် ၁ စံသည်ထိုင်ဝမ် CNS အဆင့် ၁ စံထက်မြင့်သည်။
အခြားစာနယ်ဇင်းများလျှပ်စစ်အမဲဆီစုပ်စက်၊ အမဲဆီပြန်လည်မသုံးနိုင်ပါ၊ ထိုင်ဝမ် CNS အဆင့် 1 စံအရသိရသည်
1. ကြိမ်နှုန်းမြင့်သတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် - မာကြော hrc48 အထက်;
၂။ လမ်းညွှန်ရထားလမ်း၏ကြိတ်ခွဲခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် - 0.005mm / mm အတွင်းရှိမျက်နှာပြင်သည် ra0.4-ra0.8 (မှန်မျက်နှာပြင်)၊ ပြားချပ်ချပ်၊ အပြိုင်နှင့်ဒေါင်လိုက်အထိရောက်ရှိနိုင်သည်။
၃. စက်စက်တွင်သေးငယ်သော ၀ န်ဆောင်မှု၊ မြင့်မားသောတိကျမှု၊ တိကျသောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအချိန်၊ ၀ န်ဆောင်မှုသက်တမ်းနှင့်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းခြင်းတို့၏အားသာချက်များရှိသည်။
အခြားစာနယ်ဇင်းလမ်းညွှန်ရထားလမ်းအဘယ်သူမျှမမီးရှူးဖြစ်စဉ်ကို; ကြိတ်ခွဲခြင်းပြုပြင်ခြင်း၊ မျက်နှာပြင်ကြမ်းတမ်းခြင်း ra1.6-ra3.2၊ ပြားချပ်ချပ်၊ အပြိုင်အဆိုင်၊ ၀.၃ မီလီမီတာထက်ပိုသော perpendicularity ㎡
Daya လာကြတယ်။ crankshaft အားဖြင့်မြင့်မားသောသတ္တုစပ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
အခြားပုံနှိပ်စက်များ သံမဏိ ၄၅ မျိုးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ အားနည်းချက်များ - တန်ဖိုးနည်း， ခွန်အားနှင့် ၀ တ်ဆင်မှုသည် 42CrMo နှင့်နှိုင်းယှဉ်။ မရပါ
DAYA ၏ရေနံနည်းလမ်း PRESS သည် Φ 8 အားဆီဖိအားချောဆီကိုအသုံးပြုသည်။
ကောင်းကျိုးများ - ရှည်လျားသောပိုက်လိုင်း၊ ကြီးမားသောအချင်းသည်ချောမွေ့ရန်၊ ဖျက်ရန်၊ ချောဆီချောဆီလုံခြုံမှုကိုသေချာစေရန်မလွယ်ကူပါ။
အခြားပုံနှိပ်စက်များ စာနယ်ဇင်းများ၏ရေနံဖိအားချောဆီကိုပိုက် adop6မွေးစား။
ရှေ့သို့ မြန်နှုန်းမြင့်ပူးတွဲမြန်နှုန်းမြင့်စာနယ်ဇင်း (အမြန်စီးရီး)
နောက်တစ်ခု: STX စီးရီး C ဘောင်တစ်ခုတည်း Crank စက်မှုစာနယ်ဇင်း
STC စီးရီး C အမျိုးအစား“ Open Double Point Cran ...